We She Me: စာရင်း
မဇနိ - 8/20/08, 1:46 PM
အစ်ကိုရေ “ဂေါက်“ က ဘလော့ဂ်ဂျာက ခေါင်းထုတဲ့အသံလားဗျာ :P
Andy Myint - 8/20/08, 1:48 PM
ဟုတ်ပါဘူးဂျာ… ရုံးအိတ်ကြီး ချလိုက်တဲ့ အသံပါ.. ဟီးဟီး..
kom - 8/21/08, 12:19 AM
ကိုandy က သေထိန်းပေါ. ပိုက်ဆံကို လှည်.ကြည်.စရာ မလိုဘူး။
တို.ရုံး မှာ ATM ရှိတယ်။ ကြားရက် ဆိုရင် လူရှင်းပြီး လစာထုတ်ရက်ဆိုရင် လူတန်းရှည်တယ်။ ဒါကိုကြည်.ခြင်းအားဖြင်. လစာဝင်နိုင်ပြီ ဆိုတာ ခန်.မှန်းပြီးတာနဲ. လူလစ်တာနဲ.ပြေးစီပြီး ထုတ် .ပြီးတာနဲ. မောင်ရေ…တို.လစာရလာပြီဆိုပြီး ပိုက်ဆံလေး နဲ. သူ. ကိုယပ် သွားခပ်ပေးတယ်။ အမောပြေ ပါစေတော.ရယ် ဆိုပြီး။ အိမ်လခ ကာမိရင် မဆိုးပါဘူးလေဆိုပြီး.....
တန်ခူး - 8/21/08, 1:06 PM
ဟီး ဟီး… အဲဒီအတိုင်းပဲ ဟိုတနေ့ ကပဲ အရေးကြီးထဲ အလုပ် လုပ်ဖို့ မေ့ပြီး ပို့ စ် အသစ်ကျတော့ တင်လို့ဂေါက် ပြီးပြီ…
Andy Myint - 8/21/08, 10:01 PM
ဘဏ်စာရင်းက လှည့်ကြည့်လည်း ဘလောက်လို့ တတီတီ တက်လာတာမှ မဟုတ်တာ မခင်ဦးမေရယ်... အောက်ကိုပဲ ကျကျနေတာ အဲတော့ မကြည့်တော့ဘူး အဟီး
ဟီးဟီး.. မတန်ခူး ဒီလောက် ပို့စ်တွေ တက်နေတာ